Qadar oo si jees jeesa uga jawaabtay go’aanka mideysan ee dalalka Isbaheysiga (Xiisada oo xoogeysatay) - Hablaha Media Network
Qadar oo si jees jeesa uga jawaabtay go’aanka mideysan ee dalalka Isbaheysiga (Xiisada oo xoogeysatay)
HMN:- Wasaarada arrimaha dibadda dalka Qatar ayaa shaaca ka qaaday inay ka fiirsaneyso go’aanka ay qaaten dalalka isbaheystay ee xiriirka u jaray.
Wasaaradu waxa ay sheegtay inaanu jirin wax qiil ah oo ku xanbaari kara dalalka xiriirkii diblomaasiyadeed u jaray oo ay kamid yihiin Masar, Sucuudiga, Imaaraadka, Baxreyn.
Qadar waxa ay tilmaantay in dalalka go’aanka gaaray ay yihiin kuwo aan heyn cadeeymo muujinkara in Qadar ay xiriir dhow la leedahay argagixisada caalamka.
Nuqul kamid ah haddalka wasaarada ayaa waxaa lagu yiri ”Qadar kuma degdegi doonto go’aan lamid ah kan dalalka Khaliijka, waxaan si fog uga fiirsan doonaa waxa uu noqon doono go’aankeena inagoo eegeyna danta guud”
Qadar waxa ay intaa raacisay in xiisada ka dhex aloosan dalalka uusan xiriir la laheyn shacabka, balse dalalkaasi ay isku dayayaan inay soo musaafuriyaan muwaadiniintooda.
Dhinaca kale, Qadar ayaa diiday in ay taageerto malayshiyaadka, wasiirkeeda arrimaha dibadduna wuxuu ku baaqay in la qabto wadahadal aan waxba laka qarsanaynin oo daacadnimo ku dheehan tahay.